အကယ်ဒမီအတွက် ရင်ခုန်နေတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်… – Maharmedianews
အကယ်ဒမီအတွက် ရင်ခုန်နေတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်…
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ဆိုရင် မသိသူမရှိလောက် စမ်းသစ်မှုပုံစံတွေ ရိုက်ချက်ကောင်းတွေတွေ အမြဲတမ်းပရိတ်သတ်ရင်ထဲရောက်အောင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်တတ်ပြီး မနှစ်ကဆိုရင်လဲ ရိုးမပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့ပြီး……………
ဒီနှစ်ထဲမှာလဲ အိမ်မက်မြစ်ဇာတ်ကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ ပိုင်တံခွန်တို့က အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လဲ သိရတယ်… အိမ်မက်မြစ်ဇာတ်ကားကြီးကို ရန်ကုန် ကလော အောင်ပန်း တောင်ကြီး စသည့်မြို့တွေမှာရိုက်ကူးသွားမယ်လို့လဲ သိရပါတယ်….
ကယ်ဒမီဆုရချင်ပေမယ့်လဲ မျှော်လင့်ချက်တအားမထားဘူးလို့လဲ ဖြေထားပါတယ် ဒီနှစ်မှာ မြင့်မြတ်နဲ့ အိနြေ္ဒာကျော်ဇင်တို့ကို ရစေခြင်တယ်လို့လဲ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကဖြေဆိုသွားပါတယ်
ပရိသတ်ကြီးတို့ကလည်း ရိုးမပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည် ဇာတ်ကားကြီးကို အားပေးသလိုပဲ အိမ်မက်မြစ်ဇာတ်ကားကြီးကိုအားပေးကြပါအုံးနော်…
ပရိတျသတျကွီးရေ ဒါရိုကျတာကိုပေါကျဆိုရငျ မသိသူမရှိလောကျ စမျးသဈမှုပုံစံတှေ ရိုကျခကျြကောငျးတှတှေေ အမွဲတမျးပရိတျသတျရငျထဲရောကျအောငျ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျကောငျးကောငျးနဲ့ ရိုကျတတျပွီး မနှဈကဆိုရငျလဲ ရိုးမပျေါကတြဲ့ မကျြရညျ ဇာတျကားကွီးနဲ့ ပရိသတျတှရေငျထဲကိုလှုပျခတျစခေဲ့ပွီး……………
ဒီနှဈထဲမှာလဲ အိမျမကျမွဈဇာတျကားကိုတော့ ဒါရိုကျတာကိုပေါကျကရိုကျကူးပုံဖျောသှားမယျလို့ သိရပါတယျသရုပျဆောငျ ဝတျမှုံရှရေညျနဲ့ ပိုငျတံခှနျတို့က အားဖွညျ့သရုပျဆောငျသှားမယျလို့လဲ သိရတယျ….အိမျမကျမွဈဇာတျကားကွီးကို ရနျကုနျ ကလော အောငျပနျး တောငျကွီး စသညျ့မွို့တှမှောရိုကျကူးသှားမယျလို့လဲ သိရပါတယျ….
ကယျဒမီဆုရခငျြပမေယျ့လဲ မြှျောလငျ့ခကျြတအားမထားဘူးလို့လဲ ဖွထေားပါတယျ ဒီနှဈမှာ မွငျ့မွတျနဲ့ အိန်ဒွောကြျောဇငျတို့ကို ရစခွေငျတယျလို့လဲ ဒါရိုကျတာကိုပေါကျကဖွဆေိုသှားပါတယျ
ပရိသတျကွီးတို့ကလညျး ရိုးမပျေါကတြဲ့ မကျြရညျ ဇာတျကားကွီးကို အားပေးသလိုပဲ အိမျမကျမွဈဇာတျကားကွီးကိုအားပေးကွပါအုံးနျော…
← မြောက်ကိုရီးယားရောက်နေတဲ့နှလုံးသားလေးတွေကို မြန်မာပြည်ပြန်လာအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်စံ
မြိတ်မြို့မှ ပျောက်ဆုံးနေသော နဝမတန်း ကျောင်းသား (၃) ဦးအား ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိ →